Barcelona Oo Bar-baro 1-1 La Gashay Kooxda Granada, Barca Oo Xaalka Ku Sii Xumaanayo
HomeHoryaalka SpainBarcelona oo bar-baro 1-1 la gashay Kooxda Granada, Barca oo Xaalka Ku sii Xumaanayo
September 21, 2021 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa barbarro waqtigiid hamaadka ah ka tuugtay Granada oo marti ugu ahayd garoonkeeda Camp Nou kulan kusoo dhamaaday 1-1.
Barcelona ayaa sii wada niyad-jabka ay ku bilaabatay xilli ciyaareedka iyadoo daqiiqaddii labaad ay Granada ku aftaxday gool madax ah ka hor intii aanu Araujo badbaadinin kooxda garoonkeeda joogtay.
Tababare Ronald Koeman oo ay dersin ciyaartooyo ahi kaga maqan yihiin dhaawacyo ayaa waxa uu raadinayay guul uu kaga soo kabto xasuuqii ay Bayern Munich ugu geysatay garoonkan usbuucii hore laakiin waxa ka jiidhay Domingos Duarte oo daqiiqaddii labaad madax ku qabtay kubbad uu dhinaca kasoo qaaday Sergio Escudero taas oo goolhaye Ter Stegen uu awoodi waayey inuu qabto.
Daqiiqaddii 90aad ee ciyaarta ayaa kubbad uu xerada ganaaxa ku joojiyey Gerard Pique oo beddel kusoo galay waxa uu usii taraarixiyey da’yarka Gavi oo isaguna si yar oo fudud ugu qaaday Memphis Depay iyo Araujo oo difaaca Granada goolkooda kula hor xafiiltamayay, waxaana madax awood badan ku qabtay Araujo oo dabbaal-deg weyn ka sameeyey Camp Nou.
Granada ayaa bandhig fiican muujisay qaybta hore iyadoo ka faa’iidaysanaysa kala daadsanaanta Barcelona, waxaanay heleen fursado ay goolasha guusha ku xaqiijisan karayeen, laakiin Barcelona ayaa iyaduna heshay fursado ay natiijada qaybta hore wax kaga beddeli karaysay.
Luuuk de Jong oo beddel kusoo galay ayaa lumiyey fursad dahabi ahayd sidoo kalena Sergi Roberto ayaa laga diiday inuu u dabbaal-dego mubbad uu kahelay goolka agtiisa, halka kubbad uu dhinaca midig kasoo tuuray Mignueza uu dirqi iskaga saaray goolhaye Luis Maximiano.
Barcelona ayaa soo gashay kaalinta toddobaad ee miiska kala-sarraynta horyaalka LaLiga iyadoo haysata siddeed dhibcood oo ay ka heshay afar kulan, waxaanay toddoba dhibcood ka dambaysaa Real Madrid oo hoggaanka haysa laakiin ciyaartay hal kulan oo Barcelona ka baaqday.
Natiijada ay Barcelona ka keentay ciyaartan ayaa ah mid aanay ku qanacsanayn jamaahiirtu sababtoo ah waxa garoonkeeda Camp 3-0 ugaga badisay Bayern Munich salaasadii usbuucii hore, haddana waxa barbarro 1-1 ah kula gashay Granada iyadoo horena ay barbarro ula galeen Athletic Bilbao.
Tabtabare Ronald Koeman oo shaki la gelinayay mustaqbalkiisa ayuu kusii kordhay culays badan xilli ay Khamiista u tegi doonaan Cadiz ka hor inta aanay Levante ku qaabbilin Camp Nou fiidnimada habeenka Axadda toddobaadka dambe.